चार जिल्ला घुमाएर प्रसूति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
प्रसूति व्यथा लागेको १० घण्टापछि गरिएको अपरेसनबाट आमा र बच्चाको ज्यान जोगियो
श्रावण २७, २०७५ प्रकाश बराल
बागलुङ — सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि बागलुङ–८ की सरस्वती जीसी शुक्रबार धौलागिरि अञ्चल अस्पताल पुगिन् । स्वास्थ्यकर्मीले चार घण्टामा आउनु भनेर फर्काए । दिउँसो ४ बजे सामान्य अवस्था भनिए पनि बेलुकी ८ बजेदेखि उनलाई व्यथाले सताउन थाल्यो ।
बागलुङ नगरपालिका ८ सिगानाकी सरस्वती जिसी म्याग्दी जिल्ला अस्पतालमा सल्यक्रियापश्चात सुत्केरी र नवजात शिशुसहित । तस्बिर : घनश्याम खड्का/कान्तिपुर
स्वास्थ्यकर्मीले प्रसूति कोठामा पठाएनन्। बाहिरै बस्न लगाए। साह्रै समस्या भएपछि जीसीले अनुनय विनय गरिन्। त्यसपछि बल्ल भित्र पठाइयो।
राति अबेरसम्म पनि उनले बच्चा जन्माउन सकिनन्। प्रसव पीडा सहनै नसक्ने भएपछि राति २ बजे पोखरा जानु भनेर स्वास्थ्यकर्मीले रेफरको कागज बनाइदिए।
अस्पतालमा एउटा पनि एम्बुलेन्स थिएन। आफन्तले ट्याक्सी खोजेर पोखरा कुदाए। अविरल वर्षाले पर्वत र कास्की सीमा नजिकै पुग्दा ठूलो पहिरो खसेर बाटो अवरुद्ध थियो। जीसी छटपटाएर साह्रै भएपछि आफन्तले ट्याक्सीबाट उतारेर नजिकैको एक घरमा राखे।
पर्वतको भ्याप्ले खोलामा अलपत्र पर्दा जीसीकी दिदी पम्फा खडकाले जिल्लाका सांसदसहित धेरैजनालाई फोन गरेर सहयोग माग्दै हेलिकप्टर पठाइदिन गुहार मागिन्। मौसमको समस्या र रातको समय भएकाले त्यो पनि सम्भव भएन।
बिरामीको छटपटाहट कम नभएपछि राति नै फर्काएर पर्वत जिल्ला अस्पताल पुर्‍याइयो। अस्पतालकी प्रमुख डा. हेमा छन्त्यालले राति उठेर अपरेसन गर्ने तयारी गरिन्।
प्राविधिक कारणले अपरेसन हुन सकेन। अस्पतालमा बिरामीलाई चाहिने औषधिको अभाव थियो। त्यसपछि डा. छन्त्यालले बिहान ४ बजे म्याग्दी जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा. रोशन न्यौपानेलाई फोन गरिन्।
सबै सामग्री तयार राख्न भनेपछि बिरामीलाई लिएर आफैं बेनी अस्पताल पुगिन्। बेनी पुगेको २० मिनेटमै अपरेसन गरियो । डा. छन्त्याल र न्यौपानेले जीसी र शिशुको ज्यान बचाए।
बागलुङस्थित धौलागिरि अञ्चल अस्पतालले बिरामीलाई पोखराको गण्डकी क्षेत्रीय अस्पतालमा रेफर गरेको थियो। डा. छन्त्यालले पर्वतमै अपरेसन गर्ने निधो गरेकी थिइन्। ‘छटपटाएर मर्नुभन्दा प्रयास गरौं भनेर हामीले अधिकार दियौं,’ जीसीका श्रीमान् शंकरले भने।
धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा एक वर्षदेखि एनेस्थेसिस्ट, प्रसूति, अर्थोपेडिक र बालरोगसहितका १६ जना विशेषज्ञ डाक्टर अभाव छ। विशेषज्ञ नहुँदा जटिल अवस्थामा अपरेसन गर्न नसकिएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सागरकुमार राजभण्डारीले बताए।
करार सेवामा राखिएका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. मञ्जु पाण्डे र अर्थोपेडिक डा. निरञ्जन अर्यालको म्याद थप नभएपछि अस्पतालबाट बाहिरिए।
कांग्रेसका गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा अति आवश्यक सेवामा विशेषज्ञ डाक्टर आएका थिए। मन्त्री फेरिएको तीन दिनमै ती सबै विशेषज्ञ प्रमुख सहरका अस्पतालमा फर्केका थिए। कतिपय डाक्टरले प्रशासनलाई थाहासमेत नदिएको राजभण्डारीले बताए।
*पूर्व प्रकाशित समाचारमा असावधानीवश 'कानुनी अधिकार नभए पनि डा. छन्त्यालले अप्रेशन गर्ने निधो गरेकी थिइन्' भन्ने वाक्यांश पर्न गएकोमा त्यसलाई सच्याइएको छ। यस त्रुटीबाट उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भावना माथि पर्न गएकोचाेटतथा पाठक वर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रति हामी क्षमा चाहन्छौं।
प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ २०:२७
स्थानीय तहमा भने शिक्षाका कर्मचारी नहुँदा कामकाज प्रभावित
श्रावण २७, २०७५ सुदीप कैनी
काठमाडौँ — शिक्षा मन्त्रालयमा स्थायी र अस्थायी गरेर १ सय ९२ उपसचिवको दरबन्दी छ । तर मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय निकायमा छन् ४ सय ८७ जना । दरबन्दीभन्दा बढी रहेका २ सय ९५ उपसचिव भने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र मन्त्रालयमा हाजिर गरेर घर फर्कन गरेका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ २०:१३